Ubuhle baseCongo: ngokubonisa imibala yethu lapho sizama ukuphazamisa, ukugcina isithunzi sethu "Akubalulekile ukukhanya emehlweni abantu bonke" Siyaziqhenya ngamasiko ethu namasiko ethu; futhi azikho ukuxoxisana
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 13, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Okubaluleke kakhulu ukuthi uhlale uzikhanyisela ngokuziqhenya nangesithunzi ngaphandle kokunika noma ngubani amandla okusidumisa noma okusicisha. Masiziqhenye ngomcebo wethu wangaphakathi futhi ehloniphekile kuzo zonke izimo.
Umbuzo kuzazi zebhayibheli: angithi uNkulunkulu ka-Israyeli ubhekene nobubi obudlangile emhlabeni? IBhayibheli lisitshela ukuthi enye yezingelosi ebizwa ngokuthi uSathane, ngemuva kokuhlubuka waba yidemoni, uNkulunkulu wamphonsa phansi emhlabeni
I-Oct27 08: 13